သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက် Acid Reflux အကြောင်းသိကောင်းစရာများ | အက်ဆစ် Reflux ဆက်ဆံရန်ကဘယ်လို
သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက် Acid Reflux အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
အပေါ် Posted January 21, 2021
အက်စစ်ဓါတ်များရှိသူတို့သည်ပြင်းထန်သောအဆင်မပြေမှုများနှင့်နာကျင်မှုများကိုခံစားကြရသည်. ကံကောင်းစွာ, သင်အက်ဆစ်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်. ဤဆောင်းပါးသည်အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အလွန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်.
သင်၏ညစာသည်သင်၏အိပ်ရာမဝင်မီသုံးနာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြာသင့်သည်. သင်၏အစားအစာကိုမှန်ကန်စွာအစာကြေနိုင်စေရန်အနည်းဆုံး ၂ နာရီခန့်မတ်တပ်ရပ်နေရန်လိုအပ်သည်. ချခြင်းသည်အက်ဆစ်ကိုပြန်ပေါ်စေနိုင်သည်. မင်းအိတ်ထဲမဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်အဲဒီနာရီအနည်းငယ်ကိုမင်းလိုတယ်.
အက်စစ်ဓာတ်နှင့်အစာစားခြင်းအလေ့အထညံ့ဖျင်းခြင်းတို့သည်များသောအားဖြင့်လက်ချင်းတွဲလေ့ရှိသည်. များစွာသောလူတို့သည်အလွန်လျှင်မြန်စွာအစာအမြောက်အများကိုစားကြသည်. ၎င်းသည်စားရန်မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာဂတ်တွင်အရာရာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်. သငျသညျအပြည့်အဝခံစား၏အချက်အတိတ်မစားသင့်ပါတယ်. ညစာစားပွဲမှာတဖြည်းဖြည်းစားရမယ်. ဖြည်းဖြည်းဝါးဝါးခြင်းနှင့်ကိုက်ခဲပြီးနောက်တိုင်းသင်၏ခက်ရင်းခွကိုစားခြင်းဖြင့်သင်၏အစားအစာကိုပျော်ရွှင်ပါ.
အက်စစ်ဖလိုဂျင်လက္ခဏာပြသောအစားအစာအမျိုးအစားများကိုခြေရာခံပါ. အက်စစ်ဖလို (reflux) နှင့်ကိုင်တွယ်သူမည်သူမဆိုဤပြproblemနာစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသောအစားအစာအချို့ရှိသည်. အက်စစ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသောအစားအစာအနည်းငယ်ကိုသင်စားသုံးနိုင်သော်လည်းသင်သတိထားရန်လိုအပ်သည်.
အချို့သောအစားအစာများသည်လူများစွာတွင်အက်စစ်ဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်. အကယ်၍ သင်သည်အစာစားချိန်၌သက်တောင့်သက်သာရှိပါကဤအစားအစာများကိုရှောင်ရှားပါ. ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့တူတဲ့အရာတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပါ, နို့နှင့်အရက်.
သင်လုပ်ဆောင်သည့်ဖြောင့်မတ်သောလေ့ကျင့်ခန်းပမာဏကိုတိုးမြှင့်ပါ, လမ်းလျှောက်တာလို. ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားများသည်သင့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်. သင်ဖြောင့်မတ်စွာတည်နေမည်ဆိုလျှင်သင်၏အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်သည်တိုးတက်လိမ့်မည်. ဒါ့အပြင်, လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်, နှင့်အလှည့်၌သင်တို့၏ reflux ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာ. အက်စစ်ဓာတ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီးကျန်းမာသောအလယ်အလတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူလိုက်ဖက်သောပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုရှောင်ပါ.
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်သင်၏အက်ဆစ်ဖလက်ကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်. အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိခြင်းသည်ဤအလုပ်ကိုလုပ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်. ကျန်းမာသောလေ့ကျင့်ခန်းသည်အစာခြေလမ်းကြောင်းကိုမကြာခဏစိတ်ဆိုးစေသည်, အက်ဆစ် reflux ဖြစ်ပေါ်စေသည်. ပိုမိုအလယ်အလတ်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများ, လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရေ aerobics လိုပဲ, အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဤကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းများသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သောအနေအထားတွင်ရှိသည်, သောသင်၏အစာအိမ်ထဲမှာအက်ဆစ်ကိုစောင့်ရှောက်. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်သင်၏အပိုပေါင်ပေါင်များကိုကူညီနိုင်သည်, အရာအက်ဆစ် reflux ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချကူညီနိုင်သည်.
ကလေးကအစာအိမ်ကိုတွန်းပေးတာကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ကအက်ဆစ်ဓာတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်. အက်ဆစ်ဓါတ်ပြုမှုကိုထိန်းထားရန်မတူညီသောဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်သင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ.
သငျသညျအက်ဆစ် reflux တိုက်ခိုက်နေလျှင်သင်၏အရက်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချ. အစာအိမ်အက်ဆစ်များထုတ်လုပ်မှုတွင်အရက်သည်အဓိကအခန်းမှပါဝင်သည်. သင်ကသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်, တစ်ခွက်သို့မဟုတ်နှစ်ခွက်ကိုသောက်ပြီးသင်၏ reflux ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအမျိုးအစားကိုရှာပါ.
သငျသညျအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုမစားသင့်ပါတယ်. အမြန်အစားအစာကိုစားပါ, အလွန်သေးငယ်သောပမာဏများတွင်ကြော်ထားသောအစားအစာများနှင့်အသားနီများ. သင်တံဆိပ်များကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အစားအစာများ၏အဆီပါဝင်မှုကိုရှာနိုင်သည်. Label reading သည်အခြေခံကျသောသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာပြီးသည်နှင့်တစ်ပြေးညီဖွံ့ဖြိုးပြီးကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်တစ် ဦး အစားအစာရဲ့ alkaline များက၎င်း၏ဆွေမျိုးသော pH အဆင့်ကိုဆက်စပ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိထားမိပါသလား? အချို့သောအက်ဆစ်များဟုထင်ရသောအစားအစာများ (ဥပမာ၊. သံပုရာ) အစာကြေသည့်အခါအတော်လေး alkaline များဖြစ်နိုင်သည်. သငျသညျအက်ဆစ် reflux မှကျရောက်နေတဲ့နေတဲ့အခါဒီမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်. ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း pH ပြောင်းလဲပုံကိုနားလည်ပါ.
အစာစားနေစဉ်, အရည်စားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. သငျသညျအစာစားနေစဉ်ဘာမှမသောက်ရသောအခါ, သင်သည်သင်၏အစာအိမ်အောက်ရှိသောစိတ်ဖိစီးမှုသို့ဖြည့်စွက်နေကြသည်. ဤသည်အပိုဖိအားအက်ဆစ် reflux ၏ရောဂါလက္ခဏာများစေပါတယ်. အစားအစာအကြားသာမျက်မှန်အပြည့်သို့မဟုတ်ရေကိုသောက်ပါ, နှင့်အစာစားနေစဉ်သေးငယ်တဲ့ sips ကပ်.
အလေးအနက်အက်ဆစ် -relux ခလုတ်သည် gluten ဖြစ်သည်. ဂျုံနဲ့မုယောစပါးကိုသာနိမ့်ဆုံးမှာကိုလောင်ရပါမည်. ဤအစပျိုးအစားအစာများကို Millet သို့မဟုတ် quinoa ဖြင့်အစားထိုးပါ.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသင့်အက်ဆစ်ဓာတ်ပြissueနာ၏အမြစ်ကိုရှာရန်ကြိုးစားပါ. ပုံမှန်အားဖြင့်အပြစ်မဲ့တစ်ခုခု, ညဘက်မှာရေသောက်တာနဲ့တူတယ်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်အက်ဆစ် reflux ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. သင့်ရဲ့အက်ဆစ် reflux ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်, သင်က၎င်း၏အပုဒ်ထဲမှာရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်.
ညနေခင်း၌အိပ်ရာမထမီကြီးမားသောအစားအစာများကိုမစားပါနှင့်. တကယ်တော့, အိပ်ရာမဝင်ခင်သုံးနာရီခန့်အလိုတွင်အစာစားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်. သင်၏အစာအိမ်ထဲတွင်ပြိုကွဲနေသောအစာသည်အက်ဆစ်ဓာတ်အလွန်များစေသည်, သင်တစ် ဦး reclined အနေအထား၌ရှိကြ၏လျှင်အပူလောင်စေပါတယ်.
သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံသို့မဟုတ်အန်ခြင်း၌သွေးတွေ့ကြုံလျှင်, ဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းတွေ့ရမယ်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အက်ဆစ်ဖလက်ဖ်ထက်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ. သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများ၏အကြောင်းရင်းအတိအကျဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာသက်သာရာရနိုင်သည်.
ဖျော်ရည်သည်အက်စစ်ဓာတ်ကိုကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်. ငှက်ပျောကိုအတူတကွရောစပ်ပါ, ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်အတူသစ်တော်သီးနှင့်ပန်းသီး, တရုတ်နံနံ, romaine ဆလပ်ရွက်, နှင့်သံပုရာဖျော်ရည်. ထို့နောက်ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ. ဝမ်းချုပ်ခြင်းကအစာပြွန်ကိုပိတ်ဆို့စေသည့်အရာကိုလျှော့ချစေသည်, နှင့်ဤဖျော်ရည်ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းကဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသရန်ကူညီသည်. ၎င်းသည်အယ်ကာလိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်, အရာလည်းအစာအိမ်အက်ဆစ်ယဉ်ပါး.
အနည်းဆုံးရဖို့သေချာပါစေ 15 နေ့စဉ်အသင့်အတင့်မှလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါသည်, နှင့်သင်၏အက်ဆစ် reflux လက္ခဏာများကိုလျှော့ချသူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများကိုကောင်းစွာလည်ပတ်စေရန်ကူညီနိုင်သည်. အရမ်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ပါနဲ့, ဒီကတကယ်တော့အက်စစ် reflux ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
အက်စစ် reflux ၏ရောဂါပြီးနောက်ဘဝတူညီသည်မဟုတ်. ဒါကဆိုပါတယ်, သင်တတ်နိုင်သမျှသင်လေ့လာတဲ့အခါ, သင်ကတစ် ဦး မျက်ဒေါသထက်ပို။ ဘာမျှသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်. အထက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အခြေအနေကိုတစ်ချိန်တည်းနှင့်ပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သည်.
Tags:: အက်ဆစ် reflux လက္ခဏာတွေ, အလယ်အလတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, အစာအိမ်အက်ဆစ်, အက်ဆစ် reflux ဖြစ်ပေါ်
« မည်သူမဆိုကိုသုံးပါနိုင်သလားဒါကအက်ဆစ် Reflux အကြောင်းဂရိတ်အကြံပြုချက်များ
Acid Reflux မှဆင်းရဲခြင်း? ဤနေရာတွင်အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်ရယူပါ »